हास्यकलाकार राजाराम पौडेलेको टिप्सः भाडाको घरमा बस्नुस्, घर बनाउने पैसा लगानी गर्नुस् – Sandesh Press
August 8, 2021 318
काठमाडौँ । म काठमाडौँको मुटु मानिने नक्साल नागपोखरीमा जन्मिएँ, हुर्किएँ। मेरो बाल्यकाल त्यही नागपोखरी वरिपरि बित्यो । अहिले पनि नागपोखरीमै बस्छु। त्यहाँ मेरो पुरानो शैलीको घर छ।
काठमाडौँको रैथाने आदिवासी हुनाले पहिल्यै आफ्नै घर थियो। तर, २०४५ सालको भुकम्पले घर भत्किएपछि करीव ४ बर्ष कोठा लिएर भाडामा बस्नु परेको थियो। त्यति बेलै हो, मैले भाडामा बसेको अनुभव गरेको। भूकम्पले घर चर्किएपछि पुनर्निर्माण गर्नु परेका थियो।
हास्यकलाकारको रुपमा कमाइ ठिकै थियो। कलाकारितामा जमिरहेकै बेलामा अमेरिका पुगेँ। आफ्ना दुई छोराहरुको भविष्य सम्झिएर अमेरिका गएको हुँ। अरु जस्तो शहरमा घरजग्गा जोड्नका लागि पैसा कमाउन भनेर अमेरिका गएको होइन। दुई छोराहरुको शिक्षादिक्षा र भविष्य निर्माण गरिदिन अमेरिका भास्सिएँ।
संयोग भनौं कि के भनौं । म अमेरिका ल्यान्ड गर्न त्यस्तै तीन घण्टाजति बाँकी थियो होला । त्यही समय अमेरिकाको ट्वीनटावरमा आतंकवादी हमला भयो । निकै अत्यासलाग्दो वातावरण बनेको थियो । म अमेरिका ७ बर्षजति बसेर स्वदेश फर्किएँ । अहिले आफ्नै मुलुकमा रमाइरहेको छु ।
म काठमाडौंमा जन्मिएको हुर्किएको हुनाले मारवाडी समुदायका साथीहरुसँग घुलमिल भइरहन्थेँ । उनीहरु व्यापार व्यवसायका कुरा गरिरहन्थे । खाली, लगानी गर्ने कुरा मात्र गर्थे । आफुसँग पैसा नभए पनि बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोँच हुन्थ्यो । म पनि उनीहरुको व्यापार व्यवसाय गर्ने सोँचबाट निकै प्रभावित हुन्थेँ ।
उनीहरु भन्ने गर्थे, घर बनाउने पैसाले पहिला व्यापार व्यवसाय गर्ने, बरु आफु भाडाको घरमा बस्नु नै बृद्धिमानी हुन्छ । त्यतिबेला साथीहरुका कुरालाई त्यति गम्भिर रुपले नलिए पनि अहिले विचार गर्दा उनीहरुले ठिक कुरा गरेका रहेछन भन्ने लाग्छ।
हाम्रो समाजमा दुई थरिका मान्छेहरु हुन्छन्, एक थरी आफ्नै घर बनाएर बस्ने र अर्को थरि भाडाको घर बसेर घर बनाउने पैसाले व्यापार व्यवसाय गर्ने । मारवाडी समुदायका ती व्यवसायीहरु भाडाको घर बसेर व्यवसायमा लागानी गर्नुपर्ने सोचका थिए।
घर बनाउँदा जीवनभरको कमाइ खर्च हुन्छ । मलाई आफ्नै घरको कति आवश्यकता छ, अरुको घर भाडामा लिएर बस्दा जीवन चल्छ कि चल्दैनरु आफुसँग भएको पैसा घरमा लगाउँदा फाइदा हुन्छ कि व्यापारमारु यी कुराहरुको पहिल्यै लेखाजोेखा गरेर अगाडि बढ्दा सफलता मिल्छ ।
यदि घर आवश्यक नै हो भने आफुसँग भएको बजेटको पहिला नै लेखाजोखा गरी प्लान गरेर मात्र घर बनाउँदा राम्रो हुन्छ । काम गर्दै जाँदा पैसा पुगेन भने तपाईंको सपनाको घरले पूर्णता नपाउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा आफुसँग भएको पैसा कतै लगानी गरेर प्रतिफल हात पारी घर बनाउने प्रकृया अगाडि बढाउँदा उत्तम हुन्छ।
Prevमलेसियामा को’रोनाले मंगलबार तिनजना र बुधबार एकजना गरि चार नेपाली श्रमिकको मृ’त्यु !
Nextआज आइतबार चम्किदैछ यी ७ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
अभिनेत्री रक्षा बनिन् आमा, छोरी जन्मिएको २ महिनापछि तस्विर सार्बजनिक